Myanmar Burmese Troops Used Chemical Weapons in Kachin state
at 1/30/2018 04:27:00 AM
Pang Lai a
29.1.2018/- Majan hte mabyin masa lam
Tinang KIA dung (14) ginra Simsa post hta 28/- ya sha na mana yup tung 11:00pm ten kaw nna nyup nsha hkra myen tai hpyen ni hte yup tung majan bai gasat hkat ai lam hta 29/- ya dai hpawt hkying 7:00am ten hta she majan gan hkring nna hkying 10:00 am kaw nna matut manoi majan bai byin ai lam na chye lu ai.
Bai tinang KIA dung (27) ginra maji gung kaba makau, U dang bum hta mung 28/- ya shana daw maga kaw na hpang ai gasat gala gaw 29/- ya dai ni du hkra majan byin ai lam na chye lu ai.
Matut nna tinang KIA dung (14) ginra Simsa post hte ဇီးဖြူကုန်း magae29/- ya dai ni na majan hta myen tai hpyen ni gaw Gung nsa lom ai( Chemical Weapon)ဓာတုလက်နက် hte KIA ni hpe gap bun ai lam na chye lu ai.
Matut nna Samat post mayan hta du nga ai myen tai hpyen ni gaw majan lapran chyat rawng nga ai mung masha (3000) jan hpe pru shangun na nga ndau la nhtawm shan hte shara kaw du ai hte bai nhtang shangun nna mung masha ni hpe ninggang shatai let KIA ni nga ai shara de yan woi shang wa ma ai lam matut na chye lu ai.
Myu tsaw KIA niamatu akyu hpyi garum nga ga W.p ni e.
United Nations OCHA Myanmar's post.
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တို့အကြား ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်၌ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်၊ တနိုင်းနှင့် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်များတွင် တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့၌ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် အင်ဒွပ်ယမ်နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူစခန်းမှ မီတာ ၂ဝဝ အတွင်း မော်တာကျည်များကျရောက်ခဲ့သည့်အတွက် စခန်းရှိ နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူ လူဦးရေ ၄ဝဝ ကျော်အပါအဝင် လူဦးရေ ၇ဝဝ ကျော်မှာ တိုက်ပွဲများကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါသည်။ ထိုဒေသသို့ သွားလာခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားမှုများရှိနေပြီး၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်သို့ ဆက်သွယ်ထားသော တံတားမှာလည်း ပျက်စီးခဲ့ခြင်းကြောင့် ထိုဒေသသို့ သွားလာနိုင်မှုမှာ ပိုမိုခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့နှင့် ၂၇ ရက်အတွင်းတွင် တနိုင်းဒေသ၌လည်း ဝေဟင်မှ ဗုံးကြဲမှုများ၊ လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် အရပ်သား လေးဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝေကြိုင်နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူစခန်းအနီးသို့ မော်တာကျည်များကျရောက်ခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါဖြစ်ရပ်မှာ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလလယ်တွင်လည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ယခုအကြိမ်နှင့်ဆိုလျှင် သုံးကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် လူဦးရေ ၇ဝဝ ကျော် နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်၊ အရပ်သား ၄ ဦး သေဆုံးခဲ့
သတင်းအရင်းအမြစ်များ - ဒေသတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပူပေါင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့၊ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်။
Sources: Local humanitarian organizations, Joint Strategy Team (JST), Kachin Baptist Convention (KBC)
1.29.2018 — The Burmese military has started fighting and shooting again in Kachin State, KIA Kachin miltary base 14. A substantial portion of the Burmese military has died so they have resorted to chemical weaponry against the Kachin. Over 3,000 have breathed the gas from the bombs dropped and have already passed out. We are waiting to see what the Burmese will do next. Please pray for the Kachin people.
Breaking News: Local Reports Say Burmese Army Troops Using Civilians As Human Shields
at 1/29/2018 09:17:00 PM
Tu Tu Hkawng
မနေ့ယမွန်းလွဲ ၃ နာရီမှာထွက်လာခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူတွေ ၃၀၀၀ ထဲက အမျိုးသမီးတွေနှင့်အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ၈၀၀ ဦးကိုသာ တပ်မတော်က ဂိတ်ကျော်ခွင့်ပြုပြီး ကျန်တဲ့ ၂၀၀၀ ကျော် ကိုတော့ ပြန်ခွင့်မပြုဘဲ နမ်ကွမ်ရွှေမှော်ဟောင်း ကိုပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နမ်ကွမ်ရွှေမှော်ဟောင်းမှာတော့ KIA တွေ နေရာယူထားပြီး တပ်မတော်က ပြည်သူတွေနောက်လိုက်လာနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
Latest News January 29, 2018 KLN
KIA frontline sources reported that Burmese army troops are moving towards their positions using civilians as human shields to protect against landmines and gunfires in amber mining area in Danai Township.
Local villagers and miners who have been trapped in the firefight were reportedly asked by Burmese army troops to come out of their shelters and begin walking towards KIA troops’ positions, reported the source.
Currently, there are about 3000 civilians trapped between KIA’s 14th Battalion troops and Burmese army troops in the battle zone in Danai.
Battles have been ongoing for days in and around amber mines in Danai and Burmese military fighter jets killedacivilian on Jan 25 and another on Jan 27.
at 1/27/2018 11:44:00 AM
at 1/19/2018 12:28:00 PM
read more ++click on link
at 1/19/2018 12:20:00 PM
The Biography of Du Kaba Lahpai Naw Seng (I )
The Biography of Du Kaba Lahpai Naw Seng (Part II) – The ...
Apr 24, 2017 - Photo: Kachin rangers lined up beforeapatrol against the Japanese troops (CBI Theater). More Kachin Offensives. The Japanese apparently had more manpower and they possessed state-of-the-art weaponry. Although beingasmaller fighting force equipped with light weapons, relying on our strong will ...
The Biography of Du Kaba Lahpai Naw Seng (Part III) – The ...
Aug 28, 2017 - Photo: Kachin Rangers (WWII in Color). Kachin Exalted. After the Japanese surrender, all Northern Kachin Levies (NKL) personnel gathered at Dabak Yang, camping and resting leisurely in temporary huts we had built ourselves. In October 1944, we received the order from the headquarters affirming the ...
The Biography of Du Kaba Lahpai Naw Seng (Part IV) – The ...
Dec 27, 2017 - Photo: CBI history. Since the few remaining months leading up to the end of 1948, the Karen Nation Union(KNU) troops had been fighting the HPSPL government. On July3in 1948, the KNU troops attacked the police station in Tahtong and took control of the town. The same year on August 31, the KNU ...